Otu esi amata ma WhatsApp ma ọ bụ Instagram adaala | Nzukọ mkpanaaka
Otu esi amata ma WhatsApp ma ọ bụ Instagram adaala
Daniel Terrasa | | Instagram, Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet, WhatsApp
Ọktoba gara aga enwere ihe omume nke ọtụtụ ndị na-egbughị oge ịkọwa, ọ bụghị na-enweghị mmụọ mbibi ụfọdụ, dịka. "Ezigbo mgbụsị akwụkwọ dijitalụ." N'ezie, nke ahụ bụ nkwụsịtụ nwa oge nke ọrụ ụfọdụ netwọk mmekọrịta kachasị ewu ewu n'ụwa. Ọtụtụ nde ndị ọrụ gburugburu ụwa, nwere nkụda mmụọ na ụjọ, wee jụọ onwe ha: Kedu ihe kpatara WhatsApp ma ọ bụ Instagram ji daa?
Ọ bụ ezie na n'oge ahụ ọdịda ahụ metụtara atọ nke netwọk mmekọrịta nke Mark Zuckerberg na-edu (ma Facebook e chebere ya), nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụ ihe omume a na-atụghị anya ya. Njehie otu oge na-adịkarị, mana nnukwu ọdịda dị otú ahụ na-adịkarị ụkọ na-emekarị.
O yikarịrị ka ọ ga-ahụ ọdịda mgbe ụfọdụ, na-ewe iwe, n'agbanyeghị na ọ dị obere. Ihe a na-ahụkarị bụ nke ịchọrọ ịnweta ngwa ahụ wee chọpụta na ọ bụghị nbudata. Ajụjụ ezi uche dị na ya na-ebilite n'oge ahụ bụ ma ọ bụ ajụjụ nsogbu na ekwentị mkpanaaka anyị, nke onye ọrụ ịntanetị ma ọ bụ nke gị ngwa.
Iji mee ka a ghọtakwuo ajụjụ a wee chọpụta ka esi enweta azịza anyị na-achọ, anyị na-atụ aro ka ị na-agụ. Ma mgbe ọ bụ Instagram na-adịghị arụ ọrụ yana mgbe nsogbu bụ WhatsApp:
1 Ihe mbụ: wepụ na ọ bụ nsogbu mkpanaka
2 Etu esi amata ma ọ bụrụ na Instagram dị ala
2.1 Ọ dị ala ugbu a?
3 Otu esi amata ma WhatsApp adaala
3.1 Site na Twitter
3.2 Akuko akuko
Ihe mbụ: wepụ na ọ bụ nsogbu mkpanaka
Tupu anyị eme ihe ọ bụla ọzọ, nlele mbụ anyị ga-eme bụ nke ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ nke anyị.
Nke mbu, ikwesiri lelee na agbanyere data mkpanaka ma ọ bụ WiFi na smartphone anyị. Anyị nwere ike chọpụta ngwa ngwa naanị site na ịgakwuru panel nhọrọ. N'ịgafe anyị ga-elelekwa na agbaghị ọnọdụ ụgbọ elu (mgbe ụfọdụ ọ na-eme ya site na mmejọ).
Ọbụlagodi na-emeghị nyocha ndị a, ọ bụrụ na site na ekwentị anyị, anyị nwere ike mepee ma jiri ngwa ndị ọzọ kama anyị enweghị ike ime Instagram ma ọ bụ WhatsApp na-eje ozi, a na-akọwara okwu ahụ: nsogbu adịghị na ngwaọrụ anyị.
Ka anyị hụ ka anyị ga-esi zaa ajụjụ a ma ọ bụrụ na emebiela Instagram ma ọ bụ WhatsApp.
Etu esi amata ma ọ bụrụ na Instagram dị ala
Ozugbo anyị ewepụla ọdịda njikọ ekwentị nwere ike, ọ nwere ike bụrụ na nsogbu a sitere na Instagram. Iji hụ na nke a bụ ikpe, ọ kacha mma ịrịọ enyemaka nke webụsaịtị pụrụ iche na lelee ọkwa ọrụ. Ibe ndị a dị mfe iji ma ga-enye anyị azịza n'ime sekọnd ole na ole:
Ọ dị ala ugbu a?
Iji chọpụta ma WhatsApp ma ọ bụ Instagram adaala: Ọ dị ala ugbu a?
Aha webụsaịtị a enyeghị ohere inwe obi abụọ: Ị dara ugbu a?. N'ebe ahụ, a na-eme nyocha oge ụfọdụ na ọkwa nke weebụsaịtị dị iche iche. Otu n'ime ha bụ nke Instagram, nwere ọtụtụ ozi dị mkpa dị ka ọkwa emelitere na oge nzaghachi. Ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ dị ka o kwesịrị, a na-egosipụta okwu ahụ UP na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-esote ederede na-agụ "Instagram dị elu ma nwee ike iru."
Ke adianade do, n'okpuru ozi a usoro nke ogwe anụnụ anụnụ ebee oge nzaghachi. N'ezie, obere mmanya ndị a dị mkpụmkpụ, oge nzaghachi dị mkpụmkpụ na, ya mere, ọrụ ha ga-adị mma. N'ezie: ọ bụrụ na ịhụghị ụlọ mmanya ọ bụla, echegbula, n'ihi na nke ahụ pụtara na Instagram adaala.
Njikọ: Ọ dị ala ugbu a?
Lelee ka Instagram si arụ ọrụ na Down Detector
Atụmatụ nke abụọ anyị iji chọpụta ma Instagram ma ọ bụ WhatsApp adaala bụ Down Detector. N'adịghị ka nhọrọ gara aga, webụsaịtị a anaghị eme nlele mgbe niile, kama kama A na-azụ ya site na ozi na akụkọ sitere n'aka ndị ọrụ sitere n'akụkụ ụwa niile.
N'ụzọ dị otú a, webụ na-egosi anyị eserese nwere mmalite nke akụkọ merenụ. Eserese ndị ahụ dị mfe ịtụgharị uche: spike dị nkọ bụ akara na-enweghị mgbagha nke nnukwu nsogbu. Ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ọrụ akwụsịla ịnweta ngwa ahụ, nke ahụ nwere ike ịpụta na ọrụ ahụ adaala.
Anyị nwekwara ike isonye na Down Detector wee nye aka site na ịkọ nsogbu ọ bụla. Maka nke ahụ enwere bọtịnụ uhie na-egosi dị n'okpuru eserese.
Njikọ: Down Detector
Otu esi amata ma WhatsApp adaala
N'ihe banyere WhatsApp, ọ ga-abụ ngwa n'onwe ya ga-enye anyị ihe ngosi nke adịghị arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị enwetabeghị ozi sitere n'aka ndị ọrụ ndị ọzọ ruo oge ụfọdụ ma ọ bụ mgbe anyị na-eziga ozi na-enweghị nke nyocha abụọ. Mana mgbama mkpu bụ isi bụ mpụta nke akara elekere n'akụkụ ozi anyị: nke a na-egosi n'ụzọ doro anya na ngwa nzi ozi ngwa ngwa anaghị arụ ọrụ.
Ajụjụ na-ebilite ọzọ: Ọ bụ ihe anyị ka ọ bụ WhatsApp dara? Enwere ụzọ dị iche iche isi chọpụta:
Site na Twitter
Mgbe ọ bụla enwere nnukwu mkpọda na WhatsApp, ngwa ndị ọzọ dị ka Facebook na Instagram so ya na nkwụsị. Mgbe nke a mere, enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-abanye ozugbo Twitter na-achọ ozi site na hashtag # whatsappdown.
N'ihi ya, ikpo okwu na-aghọ ebe nzukọ maka ndị niile metụtara. N'ebe ahụ, ha na-amụta ihe kpatara ya na oge ọ ga-abụ ọdịda, ma ọ bụ naanị kwupụta iwe ha wee nọrọ ebe ahụ na-eche ka eweghachite ọrụ ahụ.
Iji nyochaa ma WhatsApp adaala anyị nwere ike iji ibe ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ma ndị Ọ dị ala ugbu a dị ka nke Down Detector. Agbanyeghị, ekwesịrị ịkwado otu ọzọ, ma maka ntụkwasị obi ya yana ogo ya nke izizi: Akụkọ mpụ.
Weebụsaịtị a na-egosipụta, ruo nkeji nkeji, akụkọ niile gbasara njehie na ihe mere na WhatsApp nke ndị ọrụ na-ebufe site na ebe ọ bụla n'ụwa. Na mgbakwunye na nke a, Outage Report nwere maapụ ezigbo oge nke ị ga-elele na mba ndị ọrụ anaghị arụ ọrụ dịka o kwesịrị.
Njikọ: Akuko akuko
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Otu esi amata ma WhatsApp ma ọ bụ Instagram adaala
Ebe ibudata akwụkwọ ahụaja kacha mma maka PS4
Kedu ihe bụ Alexa maka? Kedu ihe ị ga-eme?